अन्तर्वार्ता Archives - Nepal News Post::Nepal News Post, online news portal
थाहै नपाई साहित्यसँग म जोडिएकी रहेछु
काठमाडौंको रत्नराज्यलक्ष्मी क्याम्पसबाट अङ्ग्रेजी साहित्यमा स्नातकोत्तर र यूनिभर्सिटी अफ नेब्रास्का–ओमाहाबाट सृजनात्मक साहित्यमा स्नातकोत्तर गरेकी डाक्टर शीलु घिमिरे न्यौपानेले अमेरिकाको टेक्सस् वुमेन्स यूनिभर्सिटीमा पारिवारिक अध्ययन विज्ञानमा विद्यावारिधि गरेकी छन् । अमेरिकामा अध्ययनरत् विद्यार्थीहरुको कथामा आधारित ‘परको देशमा’ (सन् २०१३) उनको पहिलो उपन्यास हो । उनको पहिलो प्रकाशित कृति डा. ग्रेगोरी गाब्रियल मास्कारिनको वीरेन्द्र अलंकार पुरस्कृत पुस्तक द रुलिङ्गस अफ द...
टोकियो । जापानमा आउने विद्यार्थीहरु तथा यो वर्षबाट जापान सरकारले ल्याउने भनिएको दक्ष तथा अर्धदक्ष कामदारका रुपमा आउन चाहनेहरुको लागि तयार पारिएको जानकारी मुलक सामग्री । पुरा यो भिडियोमा हेर्नुहोला ।आफुले हेरिसकेपछि अरुकालागि पनि सेयर गर्न नभुल्नुहोला । (भिडियो) ...
काठमाडौं, ७ माघ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वीट्जरल्याण्डको डाभोसमा हुने विश्व आर्थिक मञ्चको ४९औँ वार्षिक बैठकमा सहभागी हुन नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका छन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अतिविशिष्ट कक्षमा ओलीलाई सभामुख कृष्णबहादुर महरा, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना र उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले बिदाइ गरे । सो अवसरमा मन्त्रिगण, सांसद, संवैधानिक निकायका प्रमुख, सरकारका विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी, सुरक्षा...
प्रवासमा बसेर लेख्दैमा डायस्पोरिक साहित्य हुँदैन – दिप पाठक(भिडियो)
टोकियो । मान्छे जहाँ गएपनि,जुनसुकै मुलुकमा पुगेपनि असलीरुपमा -आफ्नो भेषभुषा,भाषा ,संस्कृती र कलासंगनै रमाउँदछ । त्यसकै उदाहरण हो,प्रवासमा मनाईने स्वदेशी चाडपर्व,प्रवासमा आयोजना गरिने स्वदेशी कलाकर्मीहरुसंगको सांगितिक/सांस्कृतिक कार्यक्रमहरु अनि साहित्य सिर्जनाहरु । प्रदेशमा बसेर घरदेश त लगभग सबैले सम्झन्छन् नै त्यसमा पनि साहित्यिक स्रष्टाहरुले चाहीँ केबल आफुमात्रै सम्झने होईन आफ्ना रचना तथा कृतिहरुकोमाध्यमबाट अरुलाई पनि सम्झने र मनन् गर्ने परिवेश सिर्जना...
निलम्बित एसपी बिष्टः ‘म अहिले बोल्दिनँ’
काठमाडौँ, १३ भदौं । साँझ सम्पर्कमा आएका निलम्बित एसपी डिल्लीराज विष्टसँगको संक्षिप्त संवाद आजको नयाँ पत्रिकामा छापिएको छ । निर्मला पन्तको बलात्कार तथा हत्यामा दोषी पत्ता लगाउनेभन्दा पनि निर्दोषलाई फसाउन तपाईंको भूमिका भयो, त्यही आरोपमा तपाईं निलम्बित पनि हुनुभयो । तपाईंको प्रतिक्रिया के छ ? –अहिले म केही बोल्दिनँ । सुरुमा जीवन घर्तीमगर र दीपक नेगी, पछि चक्रदेव बडूजस्ता निर्दोषलाई दश–दश दिनभन्दा...
जनवरी २०१८ मा वाल स्ट्रिट जर्नलले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका वकिल माइकल कोहेनले पोर्नस्टार स्टोर्मी डानियल्सलाई १,३०,००० अमेरिकी डलर तिरेको समाचार छाप्यो । कोहेनले सो पैसा ट्रम्पको तर्फबाट राष्ट्रपति निर्वाचनको एक दुई दिन वरपर तिरेका थिए । यो पैसा वकिलले स्टोर्मीलाई उनी र ट्रम्पबीच सन् २००६ तिर एक वर्ष चलेको सम्बन्धबारे सार्वजनिक रूपमा नबोल्न कानुनी बन्देज रहने गरी तिरेका...
रबि लामिछानेको पत्रकारिताले राष्ट्रिय संबेदनसिलता माथी प्रश्न उठाएको छ – दिल निशानी
काठमाडौ । पछिल्लो समय सामाजिक संजालमा रबि लामिछाने र दिल निशानीको जुहारीले मिडियामा तरङ्ग पैदा गर्यो । रबि लामिछाने अनागरिक हुन भन्ने प्रसङ्गले रबिका फ्यानहरुलाइ चिड्यायो र दिल निशानी मगरलाई संजालमा बिरोध गर्नेहरुको लहर नै कुर्लियो। तर यता दिल निशानी मगरले भने रबि लामिछाने अनागरिक भएको अकाट्य र ध्रुब सत्य छ भनिरहेका छन। रबि लामिछानेको पत्रकारिताले राष्ट्रिय संबेदनसिलता माथी प्रश्न...
अमेरिकी रास्ट्रपति परिवार र बेलायती राजकुमारीको कपडा सिलाउने विश्व प्रख्यात नेपाली युबक
काठमाडौँ । नेपाली ठिटो प्रबल गुरुङ अमेरिकामा फेसन उद्योगका लागि चर्चित नाम हो । उनले डिजाइन गरेका ड्रेसहरू लगाउनमा प्रथम महिला मिचेल ओबामा हुन् वा बेलायती राजकुमारी केट मिडल्टन र थुप्रै हलिउड सेलिब्रेटी र गायिकाहरू गर्व गर्छन् । पछिल्लो समय झन्डै दुई वर्षअघि नेपाल आउँदा मुस्ताङ ट्रेक पुगेका थिए । त्यसबेला प्रबलले त्यहाँका बुद्धमार्गी भिक्षुले लगाउने हल्का पहेंलो, गाढा रातो...
रुझ्दै, गर्मीमा पोलिँदै बाग्मती पुलमा एक्लै हिँडेको कुरा अझै सम्झिरहन्छु- दिपाश्री निरौला
छक्कापञ्जा–२ सम्मको सफलताको सूत्र के होला ? आजको सफलता तत्काल वा रातारात प्राप्त सफलता होइन, २५ वर्षको संघर्ष, निरन्तरता एवं मेहनतको प्रतिफल हो । समय–परिस्थितिअनुसार परिवर्तन हुने सन्दर्भमा मैले नायिकाबाट कमेडियन हुँदै निर्देशनमा हात हालेकी हुँ । मैले हास्यव्यंग्यका क्षेत्रमा लागेदेखि नै दीपकजीजस्तो असल तथा प्रतिभाशाली साथी पाएँ । उहाँको जोडी हुन नपाएको भए सायदै यो सफलता हात पथ्र्याे ।...
यस देशको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मालिक भनेको रोय बेट्स नामक एक ब्यक्ति थिए । सन् २०१२ मा उनले आफूलाई त्यस देशको मालिक घोषित गरेता पनि उनी अहिले यो संसारमा छैनन् र त्यस देशको जिम्मेवारी उनका छोरा माइकलले लिएका छन् । यस देशको निर्माण दोश्रो विश्वयुद्धताका ब्रिटेनले गरेको भनाइ छ । तर, पनि यस देशलाई कुनैपनि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिइएको छैन । आफ्नै...